CISPA Haina Kufa | Martech Zone
Wednesday, May 1, 2013 Chipiri, April 30, 2013 Douglas Karr
Chero iwe paunoona bhiri richishanda nenzira yaro kuburikidza neSeneti neCongress iyo inodarika hafu yebhiriyoni yemadhora kubva kumakambani emakambani anoteera seri kwayo, iwe ungangodaro uchitarisisa zvakanyanya semugari. Sezvazvakanyorwa, CISPA haizotidzivirire kubva kutyisidziro yecyber, asi inotyora yedu yechina Amendment kodzero yekuvanzika.
Inoita kuti hurumende ikusore pasina warandi.
Zvinozviita saizvozvo iwe haikwanise kana kuziva nezvazvo mushure mechokwadi.
Zvinozviita saizvozvo makambani haagoni kumhan'arirwa pavanoita zvisiri pamutemo nedhata rako.
It inobvumira makambani kurwisa cyber mumwe nemumwe uye vanhu vari kunze kwemutemo.
Inoita yega yega yega yega yega padandemutande padandemutande, uye inotyora chinongedzo chechina.
Chechina Kugadziriswa kuUnited States Bumbiro
Kodzero yevanhu yekuchengetedzeka muvanhu vavo, dzimba, mapepa, nemhedzisiro, pakutsvaga zvisina musoro uye kubatwa, hazvizotyorwa, uye hapana maWarrant achaburitsa, asi pachikonzero chingangoitika, chinotsigirwa neOath kana kusimbiswa, uye kunyanya kutsanangura nzvimbo yekusecha, nevanhu vacho kana zvinhu zvekutorwa.
Ndokumbirawo uenderere mberi tora matanho uye pikisa CISPA.
Tags: 4th kuchinjacispaconstitutioneffyechina kugadzirisakodzero yekuvanzika